Kuhlangana kuthi ngomhla Alaphukanga Bridge kwiminyaka: Isitshayina kubekho inkqubela yamkelwa libhunga Americans reunites kunye neziphene abazali, China News - e-Asia Omnye
Kuhlangana kuthi ngomhla Alaphukanga Bridge kwiminyaka: Isitshayina kubekho inkqubela yamkelwa libhunga Americans reunites kunye neziphene abazali, China News – e-Asia Omnye
Steeped kwi-romanticcomment folklore, Alaphukanga Bridge kwi-Hangzhou, China kukuba eyona nto tourist utsalekoname ukuba izoba yeshumi ka-izigidi visitors kunyaka ngamnye kwi-shores ka-West Lake. Ukususela, indoda ekuthiwa Xu Leda braves i-throngs ukubuyela bridge rhoqo ngonyaka kwi ngemini enye.
Arriving phambi kwexesha ekuseni kwaye staying de emva kwexesha kwi-kwemini, Leda scans i-ajongene nayo kwi-indimbane, hoping ukubona engaqhelekanga, kodwa abantu abaqhelekileyo ubuso-omnye iintombi ezilahlekileyo ngoko ke ixesha elide eyadlulayo. Ukususela China waqalisa yamazwe ngamazwe kwi-adoptions phambi kwexesha s, adoptive abazali kuba abancinane ulwazi malunga umntwana wabo ke wokuzalwa usapho. Wokuzalwa abazali kwi-China rhoqo shiya akukho identifying ulwazi kwaye utyibiliko ngaphandle khangela emva relinquishing abantwana babo. Nokungabikho ulwazi malunga zabo origins amagqabi ezininzi adoptees nge-boolean ukuba kukhokelela lo mnqweno ukufumana zabo iingcambu, ingakumbi njengoko beza ubudala, kwaye grapple kunye zabo isazisi. Kodwa wokuzalwa abazali ukukhangela kwi-China ingaba kunzima ngalo ndlela kunye, ngoko ke ezimbalwa ifumanise ukuba umhla, kukho abancinane ingcebiso zokusingatha i-yeemvakalelo zakho ugqityo ejikeleze rare phinda-phinda wokuzalwa usapho ufunyenwe. I-Xu kwaye Poehler iintsapho nazi ezi yeemvakalelo zakho nobunye ubucukubhede obuninzi ngenxa yokuba banawo waphila ngayo kule minyaka izayo. Leda nomkakhe Fencing wamxelela BBC ukuba emva marrying kwaye welcoming intombi yabo yokuqala, baya kugqitywe ukuba ingaba omnye umntwana ngoko ke zabo mdala umntwana wouldn khange abe lonely ngaphandle umntwana wakokwenu. Kodwa zinika zabo mdala a umntwana wakokwenu ingaba ekuvunyelwene ngawo omnye-umntwana mgaqo-nkqubo, komlinganiselo wazisa yi-Isitshayina karhulumente kwi-ukulawula yayo soaring bonke ukukhula. Disobeying lo umthetho ngenxa kwi-harsh punishments, kuquka steep fines, ilahleko impahla, banyanzeleka kwesisu kwaye sterilization. Xa Fencing ke pregnancy wafunyanwa yayo anesihlanu inyanga, usapho ucwangciso amagosa lanyanzelisa i-kwesisu kwaye threatened ukuba tear phantsi zabo ekhaya.
Kodwa ngokunxulumene Fencing, ‘baby ke ubomi kwaba sele bamisela
Ndandingasakwazi lahla kuyo. ‘Ngoko ke, Leda kwaye Fencing kugqitywe ukuqala ubomi kwi phumeza ukunika wokuzalwa ukuba umntwana wabo, nkqu ukuba ukuqwalasela okuthethwayo zinika yakhe komnye umntu ongomnye. Baya wazimela kwi boat kwi river apho Fencing wanika wokuzalwa yabo nentombi. Kwiintsuku ezintathu kamva, Leda wathabatha zabo baby ukuya imifuno kwimakethi apho lowo kissed i-iyalalaprocess status baby gently njengoko wayesazi kwaba salani kakuhle. Kodwa yena asikwazanga nje shiya yakhe kunye asazanga kanjalo ushiye qaphela. Ngonyaka kamva, Michigan ezimbalwa Urute kwaye Ken Poehler yamkelwa zabo intombi Kati ukususela Suzhou Loluntu nentlalo-ntle Institute. Urute? efumana yeemvakalelo zakho xa yena wakhumbula mzuzu ukuze babe zinikezelwe intombi yakhe kuye. Ihamba kunye zabo intombi, Poolers kanjalo wafumana engalindelekanga enye ka-iphepha ibhalwe ngu Kati ke wokuzalwa abazali. I-qaphela waphela nge passionate plea: ‘Ukuba Uthixo sele sympathy kuba kwethu nawe care malunga nathi, makhe kuhlangana kwi Alaphukanga Bridge Ngasentshona Lake kwi-Hangzhou kwi ngentsasa ka-Isitshayina lunar umhla julayi okanye iminyaka. ‘Efanayo ukuba i-valentine ke, Ngosuku, umhla Lunar julayi yimeko ekhethekileyo umhla kwi-China, ngosuku kuba wayemthanda okkt ukuya kuhlangana kunye reunite. I-Poolers wayecinga abancinane le qaphela njengoko kokuba ube sowuzinzile kwi-usapho ubomi, kodwa iminyaka elishumi emva kokuba yamkelwa Kati, baya zifunyenweyo a sithunywa ngokusebenzisa umhlobo waza wathumela kuye kwi-bridge kwi wonyulwa emini njengoko eceliweyo kwi-qaphela. I-sithunywa ifunyenwe le wokuzalwa abazali emva ibali waba iindaba kwi-China kwaye captivated wesizwe ababukeli bomdlalo bangene. Leda kwaye Fencing baba thrilled ukufumana iindaba zabo younger intombi kwaye baqalisa isicwangciso kuba reunion. Kodwa emva sithunywa waba reluctant ukuqhubeka kwaye disappeared, babo unxulumano waba ezilahlekileyo. Ngexesha wokuzalwa usapho waba ndonwabe afake, Poolers baba overwhelmed xa faced kunye into yokuba uninzi kwi-Isitshayina umntwana ongamzalanga abe ngowakho zoluntu baba wathi, waba ukwenzeka. Ken waba ‘stunned’, kwaye Urute waba ‘petrified’ njengoko baya grappled okokuqala kunye inyaniso ka-yokwabelana intombi yabo kunye umntu ongomnye. Emva kakhulu wacinga, baye bagqiba ukulinda ukuba babelane ulwazi kunye Kati kodwa vumelani wokuzalwa abazali bazi ukuba wayengomnye kakuhle nasengozini kuba kwaye kulinywa nzulu wayemthanda ngomoya wakhe adoptive abazali. Leda kwaye Fencing waqhubeka ukwenza yabo yonyaka uhambo kwi-bridge kwi Lunar julayi i-Sisazi ukuba babeza zidityanisiwe intombi yabo abo uphilile kwaye kulungile e-United States wabanika ithemba ngonyaka ngamnye ukuba oku kuya kuba unyaka babeya kuba reunited, kuphela kuba disappointed kwakhona. Njengokuba bathi nqa ukuba kutheni abo ndalinda, boyika ukuba intombi yabo igcine a grudge okanye ukuba babeza ekubeni wayesohlwaywa ngokuthi Uthixo, oko waziva baya deserved. I-Poolers kugqitywe ukuba ulinde Kati ukuba zichaziwe a ninqwenela ukwazi okungakumbi malunga wakhe wokuzalwa usapho phambi lwe yintoni babesazi. Baya struggled kunye zabo ulwazi njengoko iminyaka yadlula de Kati ekugqibeleni wabuza ilungelo imibuzo kubo xa wayengomnye. Emva kwayo adoptive abazali waxelela wakhe into babesazi, Kati questioned kutheni abo ndalinda ngoko ke ende ukuya kuxelela yakhe. Ken kwaye Urute wamxelela BBC baya kuba ukuzisola, nkqu nokuba baye bazive benza eyona isigqibo ngexesha. I-secrets kwaye ukuzisola kuba strained Kati ke budlelwane abayo abazali. Kati kugqitywe ukuya bridge kwi-China ukuhlangabezana wakhe wokuzalwa abazali kwi wonyulwa mini. Ken kwaye Urute ndanikezela kuhamba kunye wakhe ukuba China, kodwa Kati kwehla. Xa omnye misela zabazali linda kuloo ndawo, yena sele rhoqo ngokuba ekhaya, Kati ngu ke ukuba bridge kwi-Hangzhou ukuhlangabezana omnye misela zabazali abo ulinde yakhe ekhaya ekhohlo elide edlulileyo, ukuqala entsha isahluko wakhe ibali. Khangela kwenzeka ntoni xa Kati meets yakhe usapho kwi-BBC Stories, Bahlangana Kwam ngomhla Bridge – kwi-BBC Iindaba iwebhusayithi ngoku. Okanye jonga BBC Yethu Ehlabathini kwi-BBC Ihlabathi Iindaba, Starhub isiqhagamshelanisi
BBC - Eyinkunzi - Kutheni izigidi Isitshayina abantu bamele staying omnye →